सबै क्रय शक्ति को बारे मा | अर्थतन्त्र वित्त
खरिद गर्ने क्षमता
क्लौडी क्यासलहरू | 14/10/2021 09:56 | अद्यावधिक गरियो 15/10/2021 18:49 | सामान्य अर्थव्यवस्था
यो के बारे मा जब हामी क्रय शक्ति को बारे मा कुरा को सबैभन्दा सीधा परिभाषा छ क्षमता र खरिद मात्रा को बीच सम्बन्ध कि एक व्यक्ति पैसा को एक निश्चित रकम संग गर्न सक्नुहुन्छ। आज, क्रय शक्ति को अवधारणा विशेष प्रासंगिकता मा लिन्छ। मुख्य कारण मूल्यहरु मा सामान्य वृद्धि हो, जुन सामान्यतया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई, वा मुद्रास्फीति संग सम्बन्धित छ।
केहि रोचक यो हो कि बुझ्न को लागी क्रय शक्ति के हो र यो कसरी काम गर्दछ, हामी यसलाई बढाउन को लागी कदम उठाउन सक्छौं। जाहिर छ, जब देखि यो सम्बन्धित छ, एक राम्रो वेतन एक ठूलो क्रय शक्ति को लागी मद्दत गर्दछ। तर यो जरूरी छैन। साँच्चै, र प्रयास संग, सबै कुरा जस्तै, जो कोहि बढ्न र यस सन्दर्भ मा आफ्नो स्थिति सुधार गर्न को लागी कदम चाल्नु सक्छ। यो गर्न को लागी, हामी यो लेख समर्पित गर्न को लागी क्रय शक्ति को एक राम्रो समझ को लागी तपाइँ निर्णय गर्न को लागी कि तपाइँ र यसैले यो बढाउन को लागी सक्षम हुन मद्दत गर्न को लागी समर्पित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
1 क्रय शक्ति के हो?
1.1 को रूप मा मापन?
1.2 क्रय शक्ति को उदाहरण
2 क्रय शक्ति बढाउने तरिका र तरिका
2.1 कसरी संरक्षण वा क्रय शक्ति बढाउने उदाहरण
क्रय शक्ति के हो?
क्रय शक्ति सामान र सेवाहरु को राशि द्वारा निर्धारित गरीएको पैसा को लागी खरिद गर्न सकिन्छ। यो उनीहरु मध्ये प्रत्येक को मूल्य व्यक्त गरीरहेको छ। यो अवधारणा सीधा एक सिक्का को मूल्य संग intertwined छ। यस प्रकार, समय को साथ, मूल्यहरु लाई उतार चढ़ाव हुन्छ, सामान्यतया माथी माथी, उत्पादनहरु लाई अधिक महंगा बनाउन। यो घटना मुद्रा को क्रमिक अवमूल्यन को कारण सम्भव छ।
को रूप मा मापन?
यो कसरी बाँच्न को लागत लाई प्रभावित गर्दछ ट्र्याक गर्न को लागी सक्षम हुन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई ध्यानमा राखिएको छ। यो सूचकांक एक भार हो कि सामानहरु र सेवाहरु मा मूल्यहरु को एक सेट कि उपभोक्ताहरु लाई सामान्यतया एक नियमित आधार मा खरिद गर्दछ समेटिएको छ। यस तरीकाले, भारित कि बाहिर गरिन्छ एक पहिले लिईएको संग तुलना गर्न सकिन्छ र मूल्यहरु मा वृद्धि वा कमी को निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यस मापन को लागी धन्यवाद, उपभोक्ताहरु को क्रय शक्ति निर्धारित गर्न सकिन्छ।
क्रय शक्ति को उदाहरण
त्यहाँ दुई परिदृश्यहरु जसमा क्रय शक्ति समय संगै परिवर्तन हुन सक्छ। ती मध्ये एक मा यो हो कि यो घट्छ, जो सबैभन्दा सम्भावित हो, वा त्यो बढ्छ, जो कहिले काहिँ हुन्छ।
घट्छ। यो दुई कारकहरु को कारण हुन सक्छ। अझै उत्पादनहरु को बढ्दो मूल्यहरु, मुद्रा को अवमूल्यन को लागी, वा दुबै। अझ राम्ररी बुझ्न को लागी कसरी दुबै चीजहरु लाई प्रभावित गर्दछ, चलो निम्न स्थिति को कल्पना गरौं। मानौं १,२०० यूरो एक महिना को तलब संग एक व्यक्ति एक डिपार्टमेन्ट स्टोर बाट उत्पादनहरु किन्न चाहन्छन्। त्यो सबै रकम 1.200 यूरो को लागत। अन्तमा, केहि महिना पछि, ती उही उत्पादनहरु euro०० यूरो लागत, तर जे होस् उनको तलब परिवर्तन भएको छैन र १,२०० यूरो मा रहन्छ। के भएको छ कि उसले उसको क्रय शक्ति को हानि भएको छ, र यो पनि काफी छ। पहिलो मामला मा, उनी पैसा को सही रकम बाँकी सबै उत्पादनहरु फेरि किन्न बाँकी थियो। दोस्रो मामला मा, तपाइँ मात्र 600%किन्न को लागी पर्याप्त हुनेछ।
मुद्रास्फीति भनेको के हो?
बढ्छ। अघिल्लो मामला को विपरीत, क्रय शक्ति मा वृद्धि को कारण हुन सक्छ उत्पादनहरु को सस्ता वा मुद्रा को पुनर्मूल्यांकन। तथ्य यो हो कि उत्पादनहरु अधिक वा कम लागत हुन सक्छ, पैसा को मूल्य भन्दा बाहिर, सामान्यतया आपूर्ति र माग को कारण हो। एक ठूलो माग मूल्यहरु मा वृद्धि को कारण हुनेछ, र एक ठूलो आपूर्ति उनीहरुलाई सस्ता बनाउनेछ। यस प्रकार, यस परिदृश्य मा, जो व्यक्ति 1.200 यूरो को तलब संग euro०० यूरो खर्च गरीएको छ, केहि महिना मा उही उत्पादनहरु को लागत ४०० यूरो पाउन सक्छ।
क्रय शक्ति बढाउने तरिका र तरिका
क्रय शक्ति बढाउन वा संरक्षण गर्न को लागी, जो पनि महत्वपूर्ण छ, यो हो अधिग्रहण र लगानी को माध्यम बाट। लगानी दुबै ब्यापार मा हुन सक्छ कि मूल्य परिवर्तन, स्टक, कच्चा माल संग अटकल, बन्ड, आदि प्रतिरोधी छन्। अधिग्रहण दुबै मा हुन सक्छ अचल सम्पत्ति वा बस्तुहरु जसको समय संगै कदर गर्न को लागी हुन्छ वा यसको मूल्य कायम राख्नुहोस्।
मानौं कि मुद्रास्फीति २.५%को औसत बढ्छ। यदि हामी पैसा को कुनै बचत बिना बैंक मा बचत को रूप मा राख्छौं, हामी सीपीआई मा वृद्धि को बराबर क्रय शक्ति को हानि देख्नेछौं। यसको विपरित, यदि अचल सम्पत्ति सीपीआई बराबर मूल्य मा वृद्धि गर्न को लागी, उदाहरण को लागी, हामी क्रय शक्ति कम देख्दैनौं। यस कारण को लागी, यो क्रय शक्ति को संरक्षण को लागी महत्वपूर्ण छ, वा यस मामला मा, ज्याला बाट व्युत्पन्न बचत।
जे होस्, यो सधैं सजिलो वा सबै को लागी अचल सम्पत्ति पहुँच को लागी सुलभ छैन, र यस को लागी हामी अन्य उत्पादनहरु को उपयोग गर्न सक्दछौं, त्यो कारण को लागी समान सुरक्षित र जोखिम मुक्त छैन, जस्तै शेयर बजार को रूप मा। हामी पहुँच गर्न सक्छौं मुद्रास्फीति जोडिएको बांड, टिप्स, वा स्टक को रूप मा जानिन्छ। धेरै कम्पनीहरु आफ्नो नाफा घटाउन सक्छन् यदि उनीहरुका उपभोक्ताहरु क्रय शक्ति को हानि भोग्छन्। यो अक्सर भनिएको छ कि स्टक मुद्रास्फीति को लागी प्रतिरोधी छन् उदाहरण को लागी, र यो सत्य छैन, कम से कम सबै वा छोटो अवधि मा छैन। जे होस्, केहि उपभोक्ता स्टेपल जस्तै खाना जस्तै राम्रो संग यी परिदृश्यहरु नेविगेट गर्न सक्छन्। मूलतः किनभने मानिसहरु खाना बन्द गर्दैनन्।
कसरी संरक्षण वा क्रय शक्ति बढाउने उदाहरण
हाल हामीaबाँचिरहेका छौं मुद्रास्फीति आर्थिक वातावरण ऊर्जा संकट को कारण। ग्यास आपूर्ति को अभाव र कच्चा माल को मूल्य मा सामान्य वृद्धि उपभोक्ता मूल्यहरु लाई ड्राइभ गर्दै छन्। जनसंख्या मात्र यसको प्रभाव नोटिस, धेरै कम्पनीहरु आफ्नो उत्पादन बन्द गरीएको छ र अन्य देखीएको छ वा आफ्नो उत्पादनहरु को मूल्य बढाउन बाध्य हुनेछन्। एउटा उदाहरण, खाना को। क्रय शक्ति को संरक्षण को लागी एक रणनीति आज हुनेछ खाद्य उपभोग को लागी समर्पित कम्पनीहरुको विश्लेषण गर्नुहोस्। जस्तो कि हामीले पहिले भन्यौं, उनीहरु सामान्यतया संकटहरु को लागी धेरै प्रतिरोधी छन्, एक तरीकाले किनभने मानिसहरु प्रयोग बन्द गर्न जाँदै छैनन्।
शेयर बजारमा कहाँ लगानी गर्ने
क्रय शक्ति मा वृद्धि वा कमी सामान्य र आवर्ती छ। जब सम्म यो अत्यधिक छैन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यहाँ तरिकाहरु यसलाई गुमाउने छैन। एक राम्रो वेतन, एक राम्रो जागिर, लगानी, वा किन्ने को लागी हेर्दै, कि क्रय शक्ति को बचत को रूप मा बचत गर्न को लागी लक्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
मलाई आशा छ कि तपाइँ श the्काहरु को लागी तपाइँ क्रय शक्ति को बारे मा हुन सक्छ को जवाफ पाउन सक्षम हुनुभयो। र याद गर्नुहोस्, प्रत्येक निर्णय को विश्लेषण र तपाइँको व्यक्तिगत स्थिति को अनुसार हुनु पर्छ। कुनै उदाहरण वा राय (यो ब्लग मा ती सहित) सिफारिशहरु को रूप मा लिनु हुँदैन। भविष्य अनिश्चित छ, र परिस्थिति फरक वा परिवर्तन हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » खरिद गर्ने क्षमता
डेभिड कारले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्दछ जब वेतन को बारे मा छलफल। यस बीचमा उनीहरु समग्र माग को एक ठूलो हिस्सा बनाउँछन्। राम्रो ज्याला बिना कुनै दिगो माग छैन। र माग बिना मन्दी देखा पर्दछ।
तर कारले केन्सको उपभोक्तावादी लाइन पछ्याउँदैनन् किनकि उनी मुख्यतः उत्पादक क्षेत्रमा लक्षित हुन्छन्। जहाँ ज्याला बृद्धि पनि एक बढ्दो माग हो, एक लोचदार उत्पादक प्रतिक्रिया दिईयो।
त्यो थेलर्स को मनोवैज्ञानिक कारक - मुटु वा मुटु - बहुपद उपभोग + बचत + कर + व्यापार ब्यालेन्स मा जोड्ने छ। किनभने यसको अतिरिक्त, यदि बचत खजाना छन्, त्यहाँ कुनै उत्पादक लगानी छैन।
Zacchaeus लाई जवाफ दिनुहोस्